रेटिनोब्लास्टोमा सप्ताहः तपाईंको बच्चालाई पनि आँखाकाे क्यान्सर छ कि!
| तस्वीर:नेप्लिज सोसाइटी फर अक्युलोप्लास्टिक सर्जरी
काठमाडौ, वैशाख ३१ : क्यान्सर टाइप गरी गूगल गर्नूस् त, कति धेरै वेब पेजहरू भेटिन्छन्!
इन्टरनेटमा अनेकथरी क्यान्सरबारे अनेकथरी जानकारीहरू उपलब्ध छन् – लङ क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर....आदि...आदि...।
हामीलाई पनि यी क्यान्सरहरूबारे थोरैतिनो जानकारी छ नै!
तर, आँखाको क्यान्सरबारे? यसबारे हामीमध्ये धेरैलाई कमै जानकारी छ।
अनि, बच्चाको आँखामा हुने क्यान्सरबारे नि? यसबारे त झन् कमै जानकारी छ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा. बेन लिम्बू भन्छन्, ‘बच्चाको आँखामा क्यान्सर हुन्छ भन्दा धेरै अभिभावकहरू विश्वास नै गर्दैनन्।’
रेटिनोब्लास्टोमा भनिने यो क्यान्सरबारे नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै जनचेतनाको अभाव छ। यसैले, केही वर्षयता हरेक मे महिनामा रेटिनोब्लास्टोमा अवेरनेस विक मनाइँदै आएको छ।
नेपालमा पनि यस वर्षदेखि रेटिनोब्लास्टोमा जनचेतना सप्ताह मनाउन सुरु गरिएको छ। नेपालका २७ वटा आँखा अस्पतालहरूले वैशाख २९ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी रेटिनोब्लास्टोमा जनचेतना सप्ताह मनाइरहेका छन्। आँखाको शल्यक्रिया र प्लास्टिक सर्जरी गर्ने चिकित्सकहरूको संस्था नेप्लिज सोसाइटी फर अक्युलोप्लास्टिक सर्जरीको पहलमा देशभर एकैसाथ यो सप्ताह मनाइएको हो।
पछिल्लो समय नवजात शिशु र तीन वर्षमुनिका बालबालिकामा आँखाको क्यान्सर बढी देखिन थालेकोले जनचेतना सप्ताह मनाउन थालिएको आँखा रोग चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार प्रत्येक २० हजार बालबालिकामध्ये एक जनामा रेटिनोब्लास्टोमा देखा पर्छ। नेपाली समाजमा रेटिनोब्लास्टोमा बारे जनचेतना नभएकोले यो सप्ताह मनाउन सुरु गरिएको तिलगंगा आँखा अस्पतालका वरिष्ठ आँखा रोग बिशेषज्ञ डा. रोहित सैंजुले बताए।
यो सप्ताह अवधिभर अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई रेटिनोब्लास्टोमा रोगबारे जानकारी दिइने डा. सैज्युले बताए। गत वर्ष तिलगंगा अस्पतालमा आएका ३५ जना बिरामीमध्ये १० जना बालबालिकाको दुवै आँखामा यो रोग देखा परेको उनले बताए।
यो वंशाणगुत रोग हो। यसैले, आँखाको क्यान्सर भएका आमाबुवावाट जन्मिएका बालबालिकालाई रेटिनोब्लास्टोमा भएको छ कि छैन भन्ने बेलैमा पत्ता लगाउन अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरू दिन्छन्।
रेटिनोब्लास्टोमाको समयमै उपचार नभए ज्यानसमेत जान सक्छ। समयमै रोगको पहिचान भए निको हुन सक्छ।
आँखाको नानीमा अनौठो सेतो टिका देखिनु, असामान्य रुपमा आँखा रातो हुनु, आँखाको आकार ठूलो हुनु र आँखा डेडो हुनु यो रोगको मुख्य लक्षणहरू हुन्।
Published Date: Tuesday, 14th May 16:33:39 PM
प्रधानमन्त्रीले भने झै ६ लाखको कोरोना परीक्षण गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने